कृष्णले जोडे हात-खुट्टा: बने यती हेन्डसम, रुपा दंग ! (भिडियोसहित) -
कृष्ण ओलीका दुवै हात जोडिएका छन् । कृष्णले आफ्नो दाँया हातमा अटोबकको ‘बि बायोनिक ह्याण्ड’ जोडेका छन् । चेम्बुरको बिकास सेन्टरमा रहेको अटोबक हेल्थकेयरमा कृष्णका हात जोडिएका हुन् । यो हेल्थकेयर मुम्बईमा रहेको छ । कृष्ण मुम्बई पुगेपछि अटोबकद्वारा निर्माण गरिएको खुट्टा पनि फेरेका छन् । उक्त खुट्टाले कृष्णलाई हिड्डुल सहज भएको बताए ।कृष्ण र रुपा गत श्रावन पहिलो हप्ता देखि हात जोड्ने प्रोसेसमा मुम्बई रहेका छन् । हात जोडी सकेपछि पनि हात चलाउन लामो अभ्यास र तालिम चाहिने हुँदा यस सम्बन्धित विशेषज्ञहरु संगै कृष्ण अभ्यासमा छन् ।
अटोबक हेल्थकेयरले कृष्णलाई हात कसरि चलाउने भन्ने बारे प्रत्यक दिन अभ्यास गराउदै आएको छ । कृष्ण मुम्बई पुगेपछि अटोबकद्वारा निर्माण गरिएको खुट्टा पनि फेरेका छन् । उक्त खुट्टाले कृष्णलाई हिड्डुल सहज भएको बताएका छन् । कृष्णको हात जोडिरहेको जर्मनीको अटो बक्स हेल्थकेयर हो । एसियाको मुख्य कार्यलय चेम्बुरको बिकास सेन्टर मुम्बईमा रहेको छ ।
के हो अटोबक बि-बियोनिक ह्याण्ड ?
जर्मनीको कम्पनि अटोबक हेल्थकेयरद्वारा निर्मित कृतिम हात हो ‘अटोबक बि-बियोनिक ह्याण्ड’ (Ottobock Bebionic Hand) । यो हात नाडीको भागदेखि पुरै फुल राउण्डमा घुम्ने गर्छ । कृतिम हात मसलको सेन्सरबाट चलाइन्छ । प्रत्येक औंलामा मोटर्स जडान गरिएको छ । उक्त हातले सेन्सरको इशारामा समन्वय गर्दै पकड्न वा अन्य सरल कार्य गर्न सक्दछ । कृतिम हात ‘अटोबक बि बायोनिक ह्याण्ड’ विश्वभर धेरै उपयोगी मानिन्छ । बि-बियोनिक ह्याण्डले व्यक्तिको दैनिकि कार्य गर्न सक्नेगरि डिजाइन गरीएको छ । खाना खान, झोला बोक्न, ढोका खोल्न, बत्तीको स्विच थिच्न, टाइप गर्न, लेख्न र जुत्ता लगाउने लगायतका सरल कार्यहरु गर्न मद्दत गर्छ । अटोबकले हातहरु तीन अलग आकारमा उपलब्ध गराएको छ र यसमा व्यक्तिगत आवश्यकता अनुरूप मनपर्ने मल्टिपल विकल्पहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस भिडियो कृष्णको अभ्यास!
प्रकाशित मिति २३ भाद्र २०७६, सोमबार १४:४४